Fitsangatsanganana sy fizahan-tany sinoa: fiverenana matanjaka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Fitsangatsanganana sy fizahan-tany sinoa: fiverenana matanjaka
Fitsangatsanganana any Sina
Ny vahoaka sinoa dia tia mivezivezy sy miantsena, ary izany dia mahatonga ny rambona mahery amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahantany.
Inona no fiantraikan'ny areti-mandringana amin'ny fiainana isan'andro sinoa, indrindra ny fiatraikan'ny fitondran-dia?
Hahita fisondrotana mihoatra ny 200% amin'ny fiaingana iraisam-pirenena i Shina amin'ny 2021, mahatratra 30 tapitrisa ny fiaingana iraisam-pirenena.
Ny ambaratonga mialoha ny COVID-19 dia antenaina hiverina amin'ny 2023 miaraka amin'ny vinavina fifamoivoizana mivoaka hahatratra 88 tapitrisa.
Misy ny antony matoky ny firoboroboan'ny fivezivezena any Shina 2021, na eo aza ny fameperana ny fitsangatsanganana izay napetraka nandritra ny taom-baovao. Izany dia araka ny fikarohana farany nataon'ny tsena sinoa notontosain'i m1nd-set.
Ny masoivoho mpikaroka Suisse dia nampiseho tamin'ny fanadihadiana manokana nifantoka tamin'i Shina tamin'ny fahitana ny fivezivezena sy ny mpivarotra fa, manoloana ny fahatokisan'ny mpanjifa, ny fiovan'ny fitondran-tena sy ny faniriana tsy hitsahatra ny mpanjifa sinoa handeha 2021 dia hanamarika ny fiandohan'ny fiverenana matanjaka ho an'ny ny sehatry ny fivarotana fivarotana any Sina. Araka ny fikarohana, hahita fisondrotana mihoatra ny 200% i Sina ao fiaingana iraisam-pirenena tamin'ny 2021, hahatratra ny fiaingan'ny fiaingana iraisam-pirenena 30 tapitrisa eo ho eo. Ny ambaratonga mialoha ny COVID-19 dia antenaina hiverina amin'ny 2023, raha ny fifamoivoizana ivelany dia vinavinaina hahatratra 88 tapitrisa aorian'ny fitomboan'ny 108% amin'ny 2022 ary 44% amin'ny 2023. Tonga ny vinavinan'ny fitomboana na eo aza ny fameperana napetraka alohan'ny fialantsasatry ny taombaovao sinoa, izay nahitana mpanjifa sinoa 28 tapitrisa nikatona taorian'ny fipoahan'ny valanaretina vaovao ny valanaretina COVID-19 any amin'ny faritany avaratra Heilongjiang sy Hebei.
Ny fikarohana ao amin'ny tsenan'i Sina koa dia manome tsipiriany momba ny mombamomba ilay mpitsangatsangana sinoa, ny fiantraikan'ny valanaretina amin'ny fiainany andavanandro, ary indrindra ny fiatraikany amin'ny fitondran-tenany. Ny fikarohana dia nilaza fa ny fanatsarana ny fepetra fitiliana sy ny fikajiana, miaraka amin'ny fahatongavan'ny vaksininy, dia mampiseho fa ny valan'aretina farany dia tsy antenaina hitondra kapoka lehibe toy ny nipoahan'ny areti-mandringana 12 volana lasa izay. Niova be ny fironan'ny mpizaha tany any Shina hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana, ary ny mpitsangatsangana sinoa izao dia mijery tsara kokoa ny fepetra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana, amin'ny fampiharana fidiovana lehibe kokoa rehefa mandeha. Ny vokatry ny vaksinin'ny COVID-19 sy ny fiantraikan'izany amin'ny fanirian'ny mpitsangatsangana sinoa sy ny fitondran-tenany miantsena nomaniny dia dinihina amin'ny fikarohana.
Maherin'ny antsasaky ny (53%) mpitsangatsangana sinoa nohadihadiana no nilaza fa nisy vokany ratsy ny fidiram-bolan'izy ireo vokatry ny areti-mandringana, somary ambany noho ny salan'isa manerantany 55%, miaraka amin'ny fidinana eo anelanelan'ny 5% sy 20% raha oharina amin'ny pre-COVID -19 ambaratonga any Sina. Mikasika ny fidirana an-tsehatra iraisam-pirenena dia nilaza ny ampahatelon'ny mpitsangatsangana sinoa fa hanao dia lavitra indray izy ireo fa ao anatin'ny 6 volana voalohany aorian'ny famongorana ny fameperana. Ny vaksinin'ny COVID-19 dia tsy azo ihodivirana fa hisy fiatraikany lehibe any Shina satria 97% amin'ireo mpitsangatsangana sinoa no vonona handray io vaksininy io, izay ny ankamaroan'izy ireo dia nilaza fa aleony manao vaksiny haingana araka izay tratra. Matetika ny Sinoa no mieritreritra ny handehandeha indray raha efa nahazo ilay vaksiny raha oharina amin'ireo mpandeha manerantany (39% vs 31%).
Rehefa mandeha iraisam-pirenena izy ireo amin'ny farany, dia mampiseho ny fironana sy ny fanamby tsara ny fikarohana. Raha 80% amin'ireo mpandeha mitsidika matetika ny fivarotana Duty Free no mbola hanao izany amin'ny dia iraisam-pirenena amin'ny ho avy, izay avo kokoa noho ny salanisa manerantany amin'ny 73%, ny roa ampahatelon'ny mpitsangatsangana sinoa kosa dia nilaza fa handany fotoana kely kokoa amin'ny seranam-piaramanidina raha oharina amin'ny teo aloha . Manodidina ny 27% ihany koa no handany fotoana kely kokoa ao anaty magazay, ary mihoatra ny antsasaky ny hanandrana hitoka-tena amin'ny vahoaka, mihoatra noho ny mpandeha antonony manerana ny faritra eran'izao tontolo izao.
Talen'ny Fikarohana momba ny fivarotana antsinjarany ao amin'ny m1nd-set, Clara Susset, dia naneho hevitra hoe: "Ny serasera dia lakilen'ny fanarenana taorian'ny COVID-19 any Shina. Mila miasa miaraka ny indostria hamerina ny fahatokisan'ny mpandeha sy hitaona azy ireo hiverina any amin'ireo magazay. Tena ilaina ny manome fidirana mora amin'ny fampahalalana mazava momba ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fahatarana mandritra ny dian'ny seranam-piara-manidina noho ny fepetra sy fomba fanao amin'ny fanovana namboarina. ”
"Ny mpitsangatsangana sinoa dia maneho ny safidiny mazava - ary ny fironana lehibe kokoa noho ny mpandeha manerantany - ho an'ny teknolojia nomerika toy ny QR Codes, hoy hatrany i Susset," ho fomba iray hianarana bebe kokoa momba ny vokatra sy ny marika any amin'ny fivarotana Duty Free, hikaroka vokatra manokana ary hijerena vidiny alohan'ny fividianana. Ny fikarohana dia mampiharihary fironana vaovao toy izany ary manome tolo-kevitra momba ny fomba hanatonana io tsena tena ilaina io mba hahazoana antoka fa ny sehatra fivarotana fivarotana dia afaka mahazo tombony amin'ny fanarenana sinoa araka izay tratra. ”
Ny Royal Caribbean Group dia namoy ny $ 1 lavitrisa $ tamin'ny Q4 2020